corona nepal Archives - Nagarik Today
होम » corona nepal
२४ घण्टामा १६७७ संक्रमित थपिए,२१ जनाको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १६७७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा आरटी पीसीआर परिक्षण गर्दा १४२३ जना र एन्टिजन परिक्षण गर्दा २५४ जना गरि जम्मा १६७७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा २०७२ जना कोरोनामुक्त भएका छन् योसंगै नेपालभर हालसम्म कोरोना संक्रमित निको हुनेदर ९४.७ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मृतकको संख्या २१ रहेको छ । यस्तै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १० हजार ८ सय ७९ रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १५ हजार ३४ जनाको कोरोना परिक्षण गरेका थिए । यस्तै, हाल सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ३० हजार ३०३ रहेको छ ।
थप २४८२ जनामा कोरोना संक्रमण, ४४ जनाको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा २४८२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा आरटी पीसीआर परिक्षण गर्दा १८६२ जना र एन्टिजन परिक्षण गर्दा ६३० जना गरि जम्मा २४८२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार भन्दा बढी कोरोनामुक्त भएका छन् भने मृतकको संख्या ४४ रहेको छ । यो मृतकको संख्या केहि दिन यतादेखिको समावेश तथ्यांक रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १५ हजार २९० जनामा कोरोना परिक्षण गरिएको थियो । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
भदौ ९, २०७८0comment
साउन २५ देखि ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज दिइने
कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो डोज खोप लगाउन बाँकी १३ लाख ३८ हजार बढी जेष्ठ नागरिकहरुले साउन २५ गतेदेखि खोप लगाउन पाउने भएका छन् ।स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखाका अनुसार यही साउन २५ गतेदेखि कोभिशिल्डको दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेका ६५ वर्ष माथिका १३ लाख ३८ हजार बढी जेष्ठ नागरिकहरुले खोप लगाउन पाउने भएका हुन् ।
खोप महाशाखाका अनुसार सुरुमा क्रमशः बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकलाई उक्त खोप दिइने छ । उक्त खोप अभियान प्रदेश १ र २ मा भने केही दिन ढिलो हुने जनाइएको छ । गत वर्षको फागुन तेस्रो साता ६५ वर्षमाथिका १३ लाख ३८ हजार भन्दा बढी जेष्ठ नागरिकले भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटले विकास गरेको कोभिशिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका थिए ।
पहिलो डोज लगाएको १२ सातापछि दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएपनि खरिद सम्झौता अनुसार भारतले दश लाख डोज खोप नदिएपछि उनीहरुले दोस्रो डोज लगाउन पाएका थिएनन् ।
बढ्न थाले कोरोनाका बिरामी, उपत्यकाका अस्पतालमा अत्यधिक चाप
देशभर क्षेत्रगत रुपमा लागु भएको निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनानुदिन उकालो लाग्न थालेको छ । संक्रमित थपिने क्रम बढेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरुमा देखिन थालेको छ । बिस्तारै संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमित बिरामीको चाप बढ्दै गइरहेको छ ।
टेकु अस्पतालमा आज आइसियूमा २२ जना बिरामी रहेका छन् । टेकु अस्पतालमा आज कुल ९२ जना कोरोना संक्रमित बिरामी रहेका छन् । अस्पतालमा आइसियू बेड भरिभराउ हुन थालेका छन् । दैनिक १५ जनासम्म बिरामी थपिने गरेको टेकु अस्पतालका सूचना अधिकृत नवराज गौतमले जानकारी दिए । संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा चाप महसुस हुन थालेको उनले बताएका छन् । २४ वटा आइसियूमा २२ जना आइसियू भने भरिएका छन् । त्यस्तै सामान्य बेडमा ५४ जना बिरामी र भेन्टिलेटरमा १६ जना बिरामी रहेका छन् ।
आइसियूमा रहेका बिरामीको अवस्था भने सिकिस्त रहेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमा सञ्चो हुने बिरामीको संख्या भने उच्च रहेको टेकु अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले जानकारी दिएका छन् । ‘बिस्तारै बिरामी बढ्दा चाप बढ्न थालेको हो । दोस्रो लहरमा जस्तो मृत्युदर भने छैन ।’ ‘अस्पताल भरिन लागेको र अब जुनसुकै बेला पनि अस्पताल भरियो अब राख्न सक्दैनौं भन्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ’, उनले थपे ।
सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, बलम्बुमा पनि कोभिड बिरामीको चाप महसुस हुन थालेको छ । अस्पतालमा हाल १६३ जना कोभिडका बिरामीहरुको उपचार भइरहेको छ । दैनिक १२ देखि १५ जनासम्म बिरामी भर्ना भइरहेको डाक्टर प्रविन नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
बिरामीको संख्या बिस्तारै बढ्दै गएकाले अब पुनः चाप महसुस हुन थालेको उनको भनाइ छ । अस्पतालमा २० वटा आइसियू बेड रहेको छ । जसमध्ये धेरै जसो आइसियू वार्डमा अहिले पनि कोभिडका बिरामी रहेका छन् ।
डा. नेपालले भने, २ देखि ३ बेड मात्रै आइसियूमा अन्य रोगका बिरामी रहेका छन् । कोभिडका बिरामी पुनः बढ्न थालेपछि अब फेरि आइसियू बेड थप्न पर्ने अवस्था आउन थालेको उनले बताए ।
काठमाडौंका विभिन्न १२ अस्पतालमा अहिले कोभिडका बिरामी रहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, नेपाल प्रहरी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र धुलिखेल अस्पतालमा कोरोना बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
वीरेन्द्र अस्पतालमा अहिले १०९ जना कोरोना बिरामी छन् । वीर अस्पतालमा १०९ जना, प्रहरी अस्पतालमा ६८, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १२४ जना, पाटन अस्पतालमा १६० जना, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा ३७ जना, भक्तपुर अस्पतालमा २६ जना राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा अनुसन्धान केन्द्र कीर्तिपुरमा ९७ जना, धुलिखेल अस्पतालमा ४८ जना बिरामी रहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १ हजार ३३ जना बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
आइसियू भरिएको अवस्था रहेकाले अब जुनसुकै बेला पनि तेस्रो लहरले नेपालमा घण्टी बजाउन सक्ने अवस्था रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविद् बाबुराम मरासिनीले अब चाडवाड बढेसँगै कोरोनाको त्रास पनि नेपालमा बढ्ने आशंका गरेका छन् ।
मरासिनी भन्छन्, ‘भारतमा तेस्रो लहर फैलिएको एक हप्तामा नेपालमा पनि सुरु हुन्छ । नेपालका अस्पतालभन्दा पनि सर्वसाधारणले अत्यधिक मात्रामा सचेतना अपनाउनु पर्छ ।’ सबै सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
मत्युदर घट्यो, नयाँ भेरियन्टको पनि लक्षण उस्तै
संक्रमण फैलिए पनि मृत्युदर भने बिस्तारै कम भएको विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरुमा मृत्युदर भने निकै कम रहेको तथ्याङ्कमा देख्न पाइन्छ । विज्ञका भनाइले पनि सोही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेका अस्पताल टेकु तथा बलम्बुमा आएका बिरामीमा पनि लक्षण फरक भेटिएको छैन । डेल्टा भेरियन्ट तथा अन्य नयाँ भेरियन्टको चर्चा सुनिए पनि लक्षण भने पहिलेका संक्रमितमा जस्तै रहेको विज्ञले बताएका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा फैलिएको डेल्टा भेरियन्ट भने पनि संक्रमितमा पहिलेका संक्रमितको जस्तै लक्षण देखिएको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका डाक्टर प्रवीन नेपालले बताए । उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो लहरमा जुन लक्षण देखिएको थियो, अहिले देखिएकामा पनि लक्षण खासै फरक छैन ।’
डा. नेपालका अनुसार पुराना लक्षणहरु नै अहिलेका नयाँ बिरामीमा पनि रहेको बताए । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीमा पनि आइसियूका बिरामी बाहेकका बिरामी छिट्टै घर फर्किने अवस्था रहेको उनले बताए । डा. नेपाल भन्छन्, ‘केही बिरामी सिकिस्त भए पछि मात्र अस्पताल आउँछन्, तिनीहरुमा मात्र मृत्युको भय हुने गरेको छ ।’
लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएसँगै नेपालमा पुनः दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या तीब्र रुपमा बढ्न थालेको छ । मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ८४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १५ हजार ८०८ जनाको आरटी–पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३ हजार ८४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार १० हजार ८८६ जनाको आरटी–पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा २ हजार ६३४ जना र ४ हजार ९२२ जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा १ सय २०६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९९३ जना संक्रमितहरु कोरोना संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, मन्त्रालयका अनुसार ३३ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
कोभिड–१९ को तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन् ?
सरकारले बालबालिकाका लागि खोप तयार नभइसकेका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको बताएको छ । खोप लगाउन नपाएका बालबालिका अब आउन सक्ने कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको उच्च जोखिममा पर्न सक्ने सरकारको भनाइ छ । “कतिपय विकसित मुलुकमा बालबालिका मात्र खोप लगाउन बाँकी भएकाले उनीहरु बढी प्रभावित हुन सक्ने भनिएको छ,” स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भनेको छ, “तर, नेपालमा अहिलेसम्म पनि अधिकांशले खोप नपाएकाले गम्भीर संक्रमण हुने जोखिम बालबालिकासहित खोप नलगाएका सबै व्यक्तिहरुलाई उत्तिकै छ ।”
त्यसैल सबै उमेर समूहकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरुको पालना गर्न छाड्न नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गर्न मन्त्रालयको आग्रह छ । हालसम्म भएका अध्ययनहरुले कोभिड–१९ को खोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर बिरामी पर्ने वा मृत्यु हुने जोखिम निकै कम हुने देखाएकाले आफ्नो पालोमा खोप लगाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आएको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बच्चालाई नै भनेर कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउछ भन्ने नहुने तर बच्चाहरुले खोप नलगाएका कारण उनीहरु बढी जोखिममा पर्ने बताउँछन् ।
“बच्चाहरुका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप आइसकेको छैन । त्यसैले अरुले खोप लगाएर सुरक्षित भएको अवस्थामा बच्चाहरुले खोप लगाउन नपाएका कारण उनीहरुमा संक्रमण धेरै देखिन सक्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले बच्चाहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने राम्रो उपाय अथवा संक्रमण हुन नदिन अभिभावकले नै खोप लगाएर सुरक्षित हुनुपर्छ ।” जति बढी अभिभावक कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित हुन्छन् त्यति नै बच्चालाई कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि कम हुने उनको तर्क छ । त्यसैले यदि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आएको अवस्थामा बच्चा सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनसक्ने भनिएको डा. पुन बताउँछन् ।